Malunga ne-US-iMonking Factory
ekhaya / Ngathi
Umzi-mveliso waseMonkking ugubungela indawo emalunga neehektare ezingama-35, kunye nomgangatho womasifundisane uthatha malunga ne-30,000 yeemitha zesikwere.
Sasizodwa kwiiNgxowa zokuyila kunye nokuvelisa ngeMonkking brand kunye ne-OEM brand ngaphezu kwama-27years amava. Umzi-mveliso wethu wasekwa ngonyaka we-1993, isixeko esiselunxwemeni eFujian, China, esonwabela igama "lesiXeko seengxowa kunye namatyala". Ikomkhulu lethu eliseXiamen City nakwifektri ebekwe eQuanzhou City. IMonkking yayijolise ekudibaniseni nasekulweleni ubuGcisa, ukubonelela abathengi ngeenkonzo eziphambili kunye neemveliso.
Umthengisi wakho onokuthenjwa, Olona khetho lwakho lubalaseleyo!
Sizimisele ukubonelela ngenkonzo yobungcali kunye nemveliso ebaluleke kakhulu kubo bonke abathengi basekhaya nabangaphandle. Kwangelo xesha, sizama ukunceda abasebenzi bethu ukuba benze indawo esempilweni, ekhuselekileyo, ekhululekileyo kunye nobuchule bokwenza umsebenzi wentlalo. Sifuna abantu bethu ukuba babe nentshisakalo ngento abayenzayo yonke imihla, kunye nokuphuhlisa abantu abanefuthe elihle. kubomi babo nasemsebenzini kwimeko yabo. Sifuna ukusebenza namaqabane ehlabathi ukufundisisa nokuphanda iiProjekthi ezintsha, sifumane isisombululo kwaye sihlangabezane nayo yonke imiceli mngeni emitsha.
UKWENZA ISHISHINI NATHI
Iqela le-Monkking R & D lizama ukwenza izinto ezintsha kunye nokuphuhlisa uyilo olusebenzayo lweemveliso ezingama-35 ngenyanga ukuhlangabezana neemfuno zokuthengisa zabathengi.
Imigangatho yethu yocweyo ixhotyiswe kakuhle ngabasebenzi abangaphezulu kwama-200, imigca yemveliso esi-8, iiseti ezingama-200 zoomatshini bokuthunga ngekhompyutha. Ngamandla- i-100,000pcs oobhaka abaxakekileyo okanye i-200,000pcs iibhegi ezilula ngenyanga.
Injongo yethu kukufezekisa isicwangciso esiphumeleleyo: ukunceda amaqabane ethu ukuba afumane iziphumo zeshishini ezinenzuzo, kwangaxeshanye siqinisekisa impilo ezinzileyo yomqeshwa kunye nolondolozo lwentlalo.
Umzi-mveliso waseMonkking unamava angama-27years kwicandelo leeNgxowa, ngoku sinobungcali bokuyila, ukuphuhlisa kunye nokwenza ibhegi yeentlobo ezahlukeneyo.
Ukwenza ishishini nathi, ngaba lukhetho lwakho oluchanekileyo!
Uhlobo lwethu lwe "MONKKING", olubhalise kumazwe angama-22 aphesheya kwezilwandle, kwaye saseka iiofisi zokuthengisa eMoscow, eRashiya naseXiamen, China, iyonwabela ngakumbi nangakumbi kwihlabathi liphela.
Ngamava angaphezu kwama-27years, siyile saza savelisa iintlobo zeebhegi, ezinje ngeBhegi, ibhegi yangaphandle, ibhegi yeDuffel, ibhegi / ingxowa yomthunywa, isikhwama esifutshane / umkhono weLaptop kunye nabanye. Xa izinto ezingafunekiyo zifikile kwindawo yokugcina izinto, naphambi kokuqala kwemveliso, i-IQC yethu iya kwenza uvavanyo lwelaphu kwaye ijonge uphawu lwe-silkscreen logo kunye ne-logo ye-embroidery, njl. Emva kokuthunga, i-QC iya kwenza uvavanyo lomgangatho wengxowa nganye kwaye iqiniseke ukuba zonke iingxowa zichanekile ngaphambi kokupakisha. Inkampani yethu iyaqhubeka nokuphuhlisa iimveliso kunye nokwandisa amandla emveliso, ngoku, simisele ubuhlakani bobuchule kunye neemveliso ezininzi kwicandelo lokwenziwa kwe-ODM.
IQELA LOKUTHENGISA NGOKUTHENGISA NABAXHASI
Inkonzo yethu ayisiyokuqonda abathengi kuphela, kodwa ikwanokufuna impumelelo yomthengi. Sisoloko sihambelana nomgaqo "Wokholo Olungileyo, uMgangatho, uLawulo lwezeNzululwazi", kwaye sinyanzelisa ukuba "uMgangatho wokuqala". Zibophelele ekubeni lishishini eliphambili kolu shishino, lokuvelisa uphawu oluqinileyo lwasekhaya nolwehlabathi.
Siza kuba lolona khetho lwakho luqinisekileyo kunye noMthengisi weBhegi onokuthenjwa eChina.